Zalen nak hmun nuam: 5000 man sim card kawlram ah hman khawh si lai
Arawk mi kan ram cu An vun remh ciahmah kawlram ah mirum lawng nih Phone le internet hman kahwh asi tawn mi kha Shwepyi takhun company nih 5000 man sim card cu arauh hlan ah kan hman kahwh cang lai tiah athanh cang.
Tuchun ASSK bia te cu mipi hi cucu khakha pek ding nak in mah duhmi tuahnak nawl tu kan zuam piak hna lai ati. hihi pei zapi kan ngen mi cu si ko cu. Phaisa tom pek nak in kan duh deuh mi si ko.
5000man phone kong fiang deuh rel aduh mi hrang ah,
၅,၀၀၀ တန် SIM Card မကြာမီ ရတော့မည်ဟုဆိုပြန်
မျိုးသန့် | တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၄ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဖုန်း SIM Card တခုကို ကျပ် ၅,၀၀၀ ဖြင့် အများပြည်သူသို့ ရောင်းချပေးရန် မဖြစ်နိုင်သေးဟု
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှ သတင်းထုတ်ပြန်အပြီး တရက်အကြာ အဆိုပါ ဖုန်းကဒ်များကို ကျပ် ၅,၀၀၀ ဖြင့် မကြာမီ ရောင်းချနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် "ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်ကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ရန် အချိန်များစွာ လိုအပ်ခြင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေတို့အရ ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကိစ္စမှာ လောလောဆယ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသေး" ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော် ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ မူလ ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း မကြာမီ အချိန်အတွင်း ရောင်းချပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"တည်ဆဲဥပဒေထဲက မည်သည့် ဥပဒေမဆို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် သွေဖည်နေခြင်း၊ ဆန့်ကျင်နေခြင်း၊ ညီညွတ်ခြင်းမရှိပါက ယင်းဥပဒေများ အားလုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ စတင်အသက်ဝင်သည့်နေ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။" ဟု ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် ၄၄၆ နှင့် ၄၄၇ တို့ကို ကိုးကား၍ ရွှေပြည်တံခွန် ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေတခုခုသည် အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေခြင်း၊ ညီညွတ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ တို့ကို သံသယရှိပါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးသို့ တင်ပြ အဆုံးအဖြတ် ယူသင့်ကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော် အမတ်လည်းဖြစ် ရှေ့နေတဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွန့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီမညီကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးမှာ အဆုံးအဖြတ် ခံယူရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီဟာနဲ့ တ်သက်ပြီးတော့ သူ့ဟာသူ ပြောလို့တော့ မရဘူးလေ။ အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးက ဒါဟုတ်တယ် အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဥပဒေက အတည်မဖြစ်ကြောင်း အခြေခံဥပဒေက ကြေညာရမှာ။ အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံးကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မှာ" ဟု ဦးသိန်းညွန့်က ပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည့် "စာတိုက်၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ်၊ အင်တာနက်" စသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဥပဒေပြုခွင့်ရှိကြောင်းလည်း ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် ၉၆ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၏ တနင်္ဂနွေနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်း တလုံး ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် မြေနေရာသစ် ရှာဖွေသတ်မှတ်၍ ရေဒီယိုစခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာ တပ်ဆင်ရခြင်း၊ မြို့တွင်း ဆက်သွယ်မှုနှင့် တမြို့နှင့်တမြို့ ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ကြောင်းများ အချိန်ယူ တည်ဆောက်ရခြင်း အပြင် ဖုန်းပြောဆိုခများအတွက် Online မှ ပေးချေနိုင်ရန် နည်းပညာများလည်း လိုအပ်နေသေးသည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့သော် ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလွင်နိုင်ဦးက နည်းပညာအခက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့ အချိန်တိုအတွင်း
ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ၆ လအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု တနင်္လာနေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်
ပြောကြားကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ရွှေပြည်တံခွန်မှ ဇန်နဝါရီ လဆန်းပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်လည်း ဦးလွင်နိုင်ဦးက ၅၀၀၀ တန် Sim Card များကို လာမည့် မတ်လအတွင်း ရောင်းချပေးရန်ရှိပြီး Sim Card တသန်းကို ပထမ ၆ လအတွင်း
ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကာ လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း ကဒ်ပေါင်း သန်း ၃ဝ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသွားမည်ဟု ပြောဆိုထား သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွင်း လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်မှုသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ၁ ယောက်သာရှိသည်ဟု World Bank (ကမ္ဘာ့ဘဏ်) ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ အဆိုပါ လက်ကိုင်ဖုန်း ပိုင်ဆိုင်မှု အရေအတွက်သည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်မှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ဖုန်း ၁ဝ၁ လုံးသုံးစွဲနိုင်ပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ၁၂၁ လုံး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ၉၂ လုံး၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ၅၈ လုံး၊ လာအို
နိုင်ငံသည် လူ ၁ဝဝ တွင် ၆၅ လုံး အသီးသီး သုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ လက်ကိုင်ဖုန်း သုံးစွဲနိုင်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး လူ ၁ဝဝ တွင် ဖုန်း အလုံးရေ ၁၄၄ လုံး သုံးစွဲနိုင်သည်ကြောင်း World Bank က ဖေါ်ပြသည်။
Kalatan tiva cu Rili Tinbaw dinh nak ah ser ding timi kong ah Chin mi nih India cozah sin ah biachim chonh ding an i tim ve. Hihi kan chin ram hrang ah abiapi ngaingai mi pakhat si. Rili lam kan ngeih ve ah cun kanram thilchuak ramchung ramleng zuar nak cawk nak lam tampi akan tthathnem hnga ding asi.
Tlamtling deuh rel duh mi ca ah kawlca in,
ကိုပေါက် | တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၄ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီရှိ Jamia Millia Islamia တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပရန် ရှိသည့်
မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုလားတန် မြစ်ကြောင်း စီမံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး တင်ပြသွားမည်ဟု နယူးဒေလီရောက် ချင်းအမျိုးသားပါတီ CNP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇမ်ကျင့်ပေါ် (ခ) ဇိုဇမ် က ပြောသည်။
Bridging South and South East Asia ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ ၈ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စနေနေ့က ရောက်ရှိနေပြီး အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကောင်အထည်ဖော်နေ
သော ကုလားတန် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမည်ဟု ဦးဇမ်ကျင့်ပေါ် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ပထမဆုံး ကျနော်ပြောချင်တာက အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာ ဘာလုပ်နေတယ်၊ ပြည်သူ့အတွက် ဘာအကျိုးရှိနိုင် တယ်၊ လုပ်နေတယ်ဆိုမှတော့ ကျနော်တို့က သိချင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လေ့လာမိသလောက်က ကျနော်တို့ပြည်သူလူထု အကျိုးခံစားရဖို့က အင်မတန် နည်းပါတယ်။ အများဆုံးအကျိုးရှိမှာကတော့ အိန္ဒိယ အစိုးရပါပဲ။ အာဆီယံနဲ့
ဈေးလမ်းကြောင်းကြီး ဖောက်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
စီမံချက်ကြောင့် ဒေသခံများ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မှုများကို ရေရေရာရာ မသိရသေးသော်လည်း မြစ်အတွင်း ပင်လယ်ဆားငန်ရေ ၀င်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားမှာ သေချာကြောင်းလည်း ပြောသည်။
“မြစ်ကို နက်အောင်တူးလိုက်မယ်ဆိုရင် မြစ်အနက် ဘယ်လောက်ထိ တူးပေးရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။ တူးလိုက်ရင် ဆားငန်ရည်နဲ့ မျှတထိန်းညှိလို့ မရတော့ဘူးလေ။ မြစ်ထဲ ၀င်လာမှာ။ အဲဒီဆားငန်ရည်တွေကို မထိန်းနိုင်ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ စပါးခင်းတွေ၊ ပဲခင်းတွေ ပျက်စီးသွားမှာပဲ။ နောက်ပြီး မြစ်နားက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်မှုတွေကလည်း သေချာ
ပေါက် ပျက်စီးမှာပါ” ဟု ဦးဇမ်ကျင့်ပေါ် က ပြောသည်။
ကုလားတန် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှ ကုန်စည်များကို နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် ကုလားတန်မြစ်ကိုချဲ့ကာ စစ်တွေမှ ပလက်ဝ သို့ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောများ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပလက်ဝမှ ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ကားလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာအကျိုးတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်သလဲဆိုတာကို ပွင့်လင်းမြင်သာစေချင်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့နယ်မြေမှာ
နယူးဒေလီဆွေးနွေးပွဲသို့ အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ပအိုးဝ်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦး တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အရေး ပြည်ပဆွေးနွေးပွဲအား ပထမဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီမှ မိုင်းရယ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းသီဟကျော် (ခ) စိုင်းဟတ် က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီကိုလာတာ အဓိကတော့ လေ့လာချင်လို့ပါ။ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ ရယူဖို့ပါ။ ဒီအစည်းအဝေးက
ဆွေးနွေးကြတာတွေကို ပါတီက လူကြီးများကို ချပြပြီး အဲဒီက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခံယူဖို့ အဓိကပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြော သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများအပြင် တမ္ပဒီပ၊ မေတ္တာ၊ ပေါင်းကူး၊ သင်္ဂဟ စသည့် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
Jamia Millia Islamia တက္ကသိုလ်နှင့် India Internationak Centre တို့တွင် နှစ်ရက်ကြာ ပြုလုပ်မည့် အဆိုပါ
ဆွေးနွေးပွဲများ Jamia Millia Islamia တက္ကသိုလ်၊ Tampadipa Institute နှင့် ဥရောပမြန်မာရုံး EBO တို့ ပူးပေါင်း စီစဉ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အိန္ဒိယ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အတွင်းဝန်
ဟောင်းများ အပြင် နာဂလန်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်လည်း တက်ရောက်မည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်သူ တဦးက ပြောသည်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ရေး အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆွေးနွေးစေလို
သဲသဲ | ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၆ မိနစ်
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် ချင်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းများ တိုးမြှင့် ဖောက်လုပ်ရေးကို မြန်မာသမ္မတသစ်၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း ဒေသခံ ချင်းတိုင်းရင်းသား ပါတီများက ပြောဆိုသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တတိယမြောက် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့်အပေါ် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP နှင့် ချင်းအမျိုးသားပါတီ CNP တို့က ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များ
ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိကြောင်း သမ္မတ အကြံပေး ဒေါက်တာနေဇင်လတ်က မဇ္ဈိမနှင့် မေးမြန်းခန်းတခုတွင် ဖြေကြား
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ကုန်တင်သွင်းရန်အတွက် ကုန်အပြည့် တင်လာသော ဂျစ်ကားများကို ပျက်စီးနေသော တောင်ပတ်ကားလမ်းအတိုင်း တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ။
အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် (ဇောကွတ်ထား)နှင့် ချင်းပြည်နယ် (ရိဒ်)ရှိ ဒုတိယ နယ်စပ်
ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်ကပင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု
ကြောင့် ကုန်သွယ်မှု နှေးကွေးနေကြောင်း CPP ပါတီကပြောသည်။
“နယ်စပ်လမ်းဖောက်လုပ်ရေးကို ဦးစားပေးစေချင်တယ်။ တမူးမိုးရေး နယ်စပ်လမ်း ဖောက်သလိုမျိုးပေါ့။ ရိဒ်နဲ့
ဖလမ်း နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး အတွက် လက်မှတ်ထိုးထားတာ အဲဒါ အခုထိ အကောင်အထည် မပေါ်ဘူး
ဖြစ်နေတယ်”ဟု CPP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုထန်ကပ်က ပြောသည်။
အိန္ဒိယနှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့များသို့ တိုက်ရိုက် ကုန်သွယ်နိုင်မည့် ရိဒ်- ဖလမ်း၊ ရိဒ်- တီးတိန် ကားလမ်းများ
မှာ ဂျစ်ကားငယ်များသာ သွားလာနိုင်ပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ခက်ခဲသည်ဟု CPP က ဆိုသည်။
အိန္ဒိယ မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများကို အိန္ဒိယဘက်မှ မဏိပူပြည်နယ် မိုးရေးနှင့် မြန်မာဘက်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးမြို့၊ အိန္ဒိယ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ဇောကထားနှင့် ချင်းပြည်နယ် ရိဒ်ခေါသာမြို့တို့တွင် ဖွင့်လှစ် ထားသည်။
မဏိပူ ပြည်နယ် မိုးရေးမှ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးဝမြို့အထိ ၉၉ မိုင်ရှည်သည့် တမူး-မိုးရေး ကားလမ်းကို အိန္ဒိယ အစိုးရက ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ နှစ်နိုင်ငံ အချက်အချာ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုလမ်းကို အိန္ဒိယ- မြန်မာ- ထိုင်း သုံးနိုင်ငံ အမြန်လမ်းမကြီးအဖြစ် မန္တလေး၊ မြဝတီမြို့များမှ ထိုင်းနိုင်ငံအထိ
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ် ဖောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်လျှင် ဒေသတွင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည့် အပြင်
ပြည်နယ်ဝင်ငွေ တိုးတက်လာမည်ဟု CNP ပါတီဆိုသည်။
“နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ အိန္ဒိယရဲ့ မားကတ်လိုတယ်။ ချင်းပြည်နယ် ဝင်ငွေကလည်း မားကတ်ကနေ ကောက်ရ
တဲ့ အခွန်လောက်ပဲ အားကိုးစရာရှိနိုင်ပါတယ်”ဟု CNP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလ အတွင်း ဒုတိယ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးနှင့် အိန္ဒိယ အစိုးရတို့ သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် ကုလားတန် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအပေါ် ဦးဇိုဇမ်က “ချင်းပြည်နယ်အတွက်တော့
အခုထိ ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မတွေ့သေးဘူး” ဟု ဆိုသည်။
အိန္ဒိယ ကုန်းတွင်းပိုင်း ပြည်နယ်များကို ပင်လယ်ရေကြောင်း လမ်းပွင့်စေမည့် ကုလားတန် စီမံကိန်းတွင် အိန္ဒိယ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့သို့ အဝေးပြေးလမ်းဖောက်လုပ်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ
ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှ ကုန်စည်များ ပလက်ဝ၊ စစ်တွေတို့ မှတဆင့် နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ထိုစီမံကိန်းမှာ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် တွင်ပြီးစီးမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃၂ သန်း ကုန်ကျမည် ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယ အစိုးရက ကုလားတန်စီမံကိန်းနှင့် အာရှလမ်းမကြီး စီမံကိန်းများကို နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
နေသော်လည်း ချင်းပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကွက်ကျန်နေသည်ဟု ချင်းပါတီများက ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၆ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်ကြာ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်တောင်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆၃ သန်းကို ချေးငွေအဖြစ်
Posted by kanukapa.blogspot.com at 13:55
Labels: Phone kong le Kalatan tiva kong